Ameerikaan diroonii fi misaa’eeloonni Saa’udiin miidhaan ka’umsi isaanii Iiraan jette – Fana Broadcasting Corporate
Ameerikaan diroonii fi misaa’eeloonni Saa’udiin miidhaan ka’umsi isaanii Iiraan jette
Finfinnee, Fulbaana 7, 2012 (FBC) – Ameerikaan diroonii fi misaa’eloonni Saa’udii irratti miidhaa qaqqabsiisaan ka’umsi isaanii Iiraan ta’u mirkaneeffadheera jetti.
Anga’oon Ameerikaa tokko miidiyaaf akka ibsanitti,Dhaabbata kuusaa gaazii Saa’udi Arabiyaa miidhaa guddaa kan qaqqabsiisaan ka’umsi isaanii Kaaba Iiraan irraati jedhan.
Iiraan gama isheetiin miidhaa qaqqabe kana waliin gonkumaa hidhata tokko hin qabu jechaa turteetti.
Qaamni hidhate socho’uu fi Iiraaniin deeggaramu hidhattoonni Huutii miidhaa Saa’udi kan qaqqabsiise nu’idha yoo jedhaan illee dhageetti hin arganne.
Hoogganaan Waajjira Dhimma Alaa Ameerikaa Maayk Paampiyoo “Diroonichi miidhaaf Yamaan Irraa ka’uu isaa ragaan agarsiisu tokko hin jiru, motummooleen hundi Iiraan madda inaarji addunyaa irratti miidhaa qaqqabsiifte kana balaaleeffachuu qabu.” Jedhan.
Dhaabbata kuusaa gaazii Saa’udi irratti miidhaan erga qaqqabee booddee, addunyaa irratti gatiin gaazii dabaluun isaa ni yaadatama.
Ministirri Inaarji Saa’udi Arabiyaa Wiixata darbe miidhaa dhaabbata kuusaa gaazii irratti qaqqabe suphamee gara dandeetti oomisha isaa duraatti dhuma ji’a kanaa irratti ni deebi’u jedheeera.
Aanga’oonni ameerikaa gosa diroonii fi misaa’eloota dhaabbata kuusaa gaazii Saa’udi irratti miidhaa qaqqabsiisaan adda baafneera jedhaniiru.
Itti aanaan Preezidaanti Maayk Peensi kaleessa “ Ameerikaan ragaalee hundumaa sakatta’aa jirti” erga jedhanii booddee, Hoogganaan Waajjira Dhimma Alaa Ameerikaa Maayk Paampiyoo “ ddeebiin keenya maal ta’uu akka qabu mari’achuuf” gara Saa’udi amalaa jiru jedheera.
Ministiriin Dhimma Alaa Iiraan Jaavid Zaarif fuula Twiitara isaanii irratti akka ibsanitti Ameerikaan dhugaa jiru fudhatee amanuu hin barbanne erga jedhanii boodde waldhabdee kana hunda dhaabuun kan danda’amu waraana Yamaanitti gaggeeffama jiru kana dhaabuun yoo danda’amedha jedhaniiru.
Teessoon Preezdaanti Taanzaaniyaa Daaree Salaam irraa Gara Dodoomaatti jijjirame
Jaappaan lubbuu baraartota kuma dhibba 1 fi kuma 10 ol bobbaafte
Keeniyaatti miidhaa qaqqabsiifameen lubbuun humnoota nageenya 10 darbe
Doonii Iiraan gaazii fe’etti ibiddi qabachuun ibsame